कोरोना मिटर : काठमाडौं महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार पाँच सय, अहिलेसम्म १६ जनाको निधन - ParyatanBazar.com
भदौ १६, काठमाण्डौ। देशको राजधानी तथा प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार पाँच सय नाघेको छ
महानगरभित्र बसोवास गर्ने १६ जनाको मृत्यु भएको छ । १३ भदौसम्ममा महानगरका दुई हजार चार सय ५२ जना संक्रमित छन् । त्यसयताको विवरण प्राप्त भइनसकेको महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । अहिलेसम्म वडा नं. ३, ७, १२, १३, २०, २१, २२, ३१ र ३२ मा एक–एकजना, वडा ४ मा दुईजना, १० मा तीनजना र २७ मा दुईजनाको मृत्यु भएको छ ।
महानगरपालिकाका अनुसार अहिलेसम्म चार सय ६० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । महानगरपालिकाले अहिलेसम्म संक्रमितको सम्पर्कमा आएका चार हजार दुई सय १३ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको छ । अहिले पाँच सय ४८ जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
महानगरका ३२ वडामध्ये वडा नं. ३२ मै सबैभन्दा धेरै संक्रमित छन् । यस वडामा मात्रै एक सय ९८ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । ७१ जना निको भएर फर्किएका छन् । ३६ जना अस्पतालमा उपचाररत छन् भने ५४ जना होम आइसोलेसनमा छन् ।यस वडामा कोरोनाका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका चार सय ५० जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ ।
दोस्रोमा वडा ३ मा संक्रमितको संख्या एक सय ८० पुगेको छ । जसमध्ये ५८ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । २८ जना होम आइसोलेसनमा र ७९ जना अस्पतालमा छन् । यस वडामा एकजनाको मृत्यु भएको छ । वडामा एक सय २८ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ ।
तेस्रो धेरै संक्रमण भएको वडा १६ हो । यहाँ एक सय ६६ जना बिरामी छन् । जसमध्ये होम आइसोलेसनमा २७ जना र अस्पतालमा ६० जना उपचाररत छन् । २५ जना निको भएर फर्किएका छन् भने मृत्यु कसैको भएको छैन । यस वडामा दुई सय ७५ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ ।